Ihlobo lingashisa kunokujwayelekile kulo lonke elaseSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ihlobo yisikhathi esilindeleke kwabaningi. Amazinga okushisa aphezulu akumema ukuthi uzicwilise emanzini futhi ujabulele ukunambitheka kuka-ayisikhilimu futhi ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ungakwazanga ukwenza lokho, noma okungenani, ngaphandle kokukwazi ukusizakala njengoba sizokwazi ukwenza emasontweni azayo.
Kodwa, Zithini izibikezelo ze-State Meteorological Agency (AEMET) ngaleli hlobo?
1 Ihlobo lingashisa
2 Azikho izinguquko ezinkulu emvuleni ezilindelekile
3 Amathiphu wokuchitha ihlobo ngangokunokwenzeka
Leli hlobo liyashisa impela. Ezingxenyeni eziningi zezwe, njengaseningizimu ye-Andalusia, amazinga okushisa angama-35-40 degrees Celsius asevele aqoshwa. Yebo, kunabaningi asebevele beye olwandle noma echibini, kepha ngeke babe bodwa: ngokwe-AEMET kunamathuba angama-50% okuthi amanani ezejwayelekile azokweqiwa (kuthathwe esikhathini esiyisethenjwa ngo-1981 kuya ku-2010) eNhlonhlweni yase-Iberia naseziQhingini zaseBalearic.
Eziqhingini zaseCanary amathuba athile aphansi, angama-45%.
Azikho izinguquko ezinkulu emvuleni ezilindelekile
Ngakolunye uhlangothi, uma sikhuluma ngemvula, alukho ushintsho olubalulekile olulindelekile uma kuqhathaniswa neminye iminyaka. Izimo ezimanzi, ezejwayelekile nezomile zinamathuba afanayo: ama-33%, ngakho-ke noma ngabe ubulindele ukuthi line kakhulu noma uma, ngokuphambene nalokho, ukhethe ukuthi lenze kancane, kulo nyaka kuzocishe kufane nokwedlule.
Amathiphu wokuchitha ihlobo ngangokunokwenzeka
Ngalesi sikhathi, ikakhulukazi uma uhlala endaweni eshisa kakhulu, ungaba nezinkinga eziningana usuku lonke: ubunzima bokulala, ukushintsha kwemizwelo ngenxa yokushisa ngokweqile, izinkinga zokugxila, phakathi kwabanye. Ukuzigwema, Sikunikeza uchungechunge lwamathiphu azokusiza ukuthi uchithe isizini ezolile:
Phuza okungenani amalitha amabili amanzi. Zizokugcina unamanzi amaningi futhi amaseli omzimba wakho azokwazi ukusebenza kahle. Ungalindi uze womele ukuphuza.
Yidla ukudla okusha. Ukudla amasobho nezinto ezinjalo kwandisa izinga lokushisa komzimba wakho. Kubukeka kusobala, kepha kunabantu abaningi abathi ngezikhathi ezithile banqume ukulungiselela ama-chickpeas amahle ngokwesibonelo ngolunye usuku ehlobo.
Gwema izinguquko ezingazelelwe ekushiseni. Imvamisa kuyiphutha ukuthi ngesikhathi sasehlobo kunzima kakhulu ukugula, kepha ushintsho olungazelelwe ekushiseni lunganciphisa impilo.
Gqoka izingubo ezifanele futhi ugweme imibala emnyama.
Nibe nehlobo elihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ihlobo lingashisa kunokujwayelekile kulo lonke elaseSpain